१३१३ संक्रमित थपिए, ६ जनाकाे मृत्‍यु - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेपालमा थप १३१३ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ७० हजार ६१४ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
शुक्रबार थप १४ सय ५५ जना डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै हालसम्म ५१ हजार ८६६ संक्रमित निको भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस चीनले भन्यो- कोरोनाविरुद्ध गर्न केके चाहिन्छ, लिष्ट पठाउ, हामी सामान दिन्छौं
हाल सक्रिय संक्रमित संख्या १८ हजार २८९ छ । सक्रिय संक्रमित संख्या २५ हजार पुगे फेरि लकडाउन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ६ जनाको मृत्‍यु भएसँगै नेपालमा मृत्‍यु हुनेको संख्या ४५९ पुगेको छ ।
शुक्रबार १२ हजार २६२ जनाको पीसीआर गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस नेपाल बैंकद्वारा ब्याजमा छुट
ट्याग्स: कोरोना भाइरस, डा. जागेश्वर गौतम, मृत्यु, स्वास्थ्य मन्त्रालय